Isitudiyo "Lou Rigaous"
UPascale ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Isendaweni kumgangatho osezantsi lendlu lali, ngaphandle Vis-à uzithelekisa zikhangele ngasezantsi, zaza kunye nokufikelela ezizimeleyo, studio inawo onke obutofotofo mihla:. Ezamahala unlimited Wi-Fi, TV, njengesicocisi, ifriji isikhenkcezisi, umatshini Nespresso, Injengokubengezela kabini. ..
Ibhedi entsha yesofa yokuvula ibonelela ngokusebenza kunye nokulala kamnandi. Uyakuxabisa kwakhona igumbi lokuhlambela elinamatye ngokupheleleyo elineshawa yokuhamba.
Ngokuchaseneyo, uya kufumana ipaki yemoto kunye ne-bowling alley.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngazo zonke izixhobo. Ibhedi ye-140x190 ixhotyiswe ngeepillows ezi-2 kunye ne-1 bolster. Ukubanakho ukurenta ilinen yokulala, iitawuli kunye neetawuli zeti ezi-2 nge-euro eyongezelelweyo eyi-10.
Akhiwe Hameau de Jabron, uya kuba gabhu phakathi kwe-6 km phakathi Trigance kunye binne-sur-Artuby apho uya kufumana zonke aluncedo: kwiivenkile zokutya, kwiivenkile, Ejongene nezokuxhumana, ofisi ukhenketho, cinezela icuba, igesi, umthengisi amatikiti oluzenzekelayo , iibhari, iindawo zokutyela ...
Ukuma kokugqibela ngaphambi kweVerdon, indlela yeGorges kunye neChibi laseSainte-Croix, le ndawo ngokuqinisekileyo iya kuvuyisa abathandi bendalo kunye nabakhenkethi (i-GR49 idlula kanye ecaleni kwendawo yokuhlala).
I-plus: irenti yendlu engaphezulu kwestudiyo ngokufumaneka.
Indawo yokuhlala ibekwe kwindlwana encinci ezolileyo enomtsalane wokwenyani kunye nezitrato zayo ezimxinwa kunye nezindlu zamatye ezindala. Uyakuba phakathi kweekhilomitha ezi-6 ukusuka kwiilali ezimbini eziqhelekileyo: iTrigance kunye neComps-sur-Artuby.
I-Trigance ayibaleki ngenqaba yayo yenkulungwane ye-11 ejonge ezindlwini. Namhlanje inendawo yokutyela yehotele ephezulu, kunye nebhari apho unokuthatha ikhefu elihlaziyayo ngelixa usonwabela umbono wepanorama. Ukuhamba-hamba kwizitrato ezimxinwa zelali uya kufumana iifacade ezintle, iipaseji ezigudileyo, izitrato ezineenyawo ... kunye nevenkile yokubhaka ebhaka i-michette yayo edumileyo kwi-oveni yekhulu leminyaka ubudala kunye nesikwere esinomthunzi esinendawo yokutyela enobuhlobo, phakathi kwezinye izinto.
IComps-sur-Artuby iya kukonwabisa kanye ngezitrato zayo ezincinci, imithombo yayo kunye neendawo zayo zokuhlambela ezimbini. Icawa enqatyisiweyo yenkulungwane ye-12 isangqina ubukho beeTemplars. Iisekethe ziya kukuvumela ukuba ufumane le mbali izukileyo yangaphambili kwaye uya kuba nakho ukonwabela i-panorama entle ye-180 ° ukusuka kwinduli yaseSaint André. Kwindlela enkulu engentla kwendawo yokubhaka, thanda umzobo omkhulu kunye noFernandel.
Ezi lali zimbini kunye ne-hamlet yaseJabron ziindawo ezikhethekileyo zabakhenkethi kunye nabathandi bendalo abaya kukwazi ukuncoma ilifa lendalo lalo mmandla kunye neendlela zayo zebhotani.
Okona kunomdla ngakumbi, ukuqala kweSentier Martel edumileyo yimizuzu engama-30 ngemoto.
Kancinci (imizuzu engama-50), unokonwabela iLake laseSainte-Croix kwaye umzekelo unyuke iGorges du Verdon ngephenyane-kayak okanye isikhephe sombane.
Kwiindawo eziphakamileyo, ungaphoswa kukutyelela ilali entle yaseMoustiers-Sainte-Marie, ikomkhulu lezinto zodongwe. Kwaye kutheni ungakhuli ukuya kutsho kwiPlateau de Valensole, eyaziwa kwihlabathi jikelele ngezityalo zayo zelavender.
Ukuba kuyimfuneko, abanini abahlala kumgama ongangeyure basesandleni sakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Comps-sur-Artuby